I-Photoshoot ezimbini ebusika
Ubusika lixesha elihle, xa yonke into ihlanganiswe ngesigqubuthelo esimhlophe, xa indalo ilele, le lixesha elihle lokutshiza imifanekiso yothando . I-White, iqhwa elithambileyo, i-snowflakes ewela kwizinwele - yintoni enokuyithandana? Ukuba unquma ukulungiselela iseshoni yesithombe ebusika, mhlawumbi ucinga malunga nesifundo seseshoni yesibini.
Iingcingo eziqhelekileyo zokudubula iifoto ezimbini
Ipikiniki yasebusika. Uzakufuna ingubo, ibhaskiti kunye namasketi okanye i-gingerbread, i-tangerines okanye i-apula, ngegama elilodwa-amalungiselelo. Thatha i-thermos ngehayi eshushu okanye ikhofi, iikomityi ezimnandi, kwaye uhambehamba epakini okanye kumyezo. Ukuze ube nobukhulu obukhulu, unokongeza indawo yepikiniki kunye ne-samovar kunye neqela leebhokhwe zeegusha, i-handkerchief eqaqambileyo kunye neepatheni kwisitayela somntu, okanye nge-shawl ye-downy. Qinisekisa ukuba ugqoke ngokufudumele, ungayikhohlwa malunga neenqanda kunye neengubo, kunye neemittens. Zama ukuqinisekisa ukuba iimpahla zakho zangaphandle kunye nezixhobo zidibaniswa ngemibala.
Sledge kunye ne-snowman. Hlela ulungelelwano, kunye kunye okanye ujikelezane. Uphuphuthe umthunzi weqhwa, uphosane ngebhola lebhola. Ngamagama - nwabisa, kunye nekhamera iya kubhala imvakalelo yakho yovuyo ngokwenene.
Iingcamango zobugcisa bokubumba ezimbini
Inkcazelo yefriji yasebusika. Esi sihloko sidinga ukucinga ngokucokisekileyo kwimifanekiso yeseshoni yesithombe ezimbini, ngoko kuthatha ixesha elide ukulungiselela. Kodwa umphumo ufanelekile. Unokwazi "ukuzama" kwiimpahla ze-Snow Maiden kunye neSanta Claus, okanye i-Red Hood ne-Wolf.
Indawo ezintle. Ngokuqinisekileyo, kufuphi nalapho kukho izakhiwo ezithakazelisayo - izindlu ezindala, izindlu ezishiyiweyo, okanye ihlathi eliqhelekileyo, elibusika liba lihle kwaye liyamema. Kuphi enye indawo onokuyihlakulela ngayo iingcamango malunga neentlobo zentsimbi kunye nenkosikazi yakhe entle? Kuphela kwendlela yokubonakalisa imifanekiso enokuyidinga ukucinga ngokucophelela yonke into - ukusuka kwisambatho ukuya kwi-hairstyle kunye nokwenza. Kwaye uye phambili kwi-story story!
Izambatho zemihla ngemihla
Indleko yomtshakazi weHalloween
Iingubo Zesizwe Zomhlaba
Izambatho zobuSulumane zabasetyhini
Khetha iingubo zeqela le-pajama
Yintoni enxiba ngayo izicathulo ze-orange?
Ihapa ukuba yambathe
Umdlalo wezemidlalo 2014
I-Normcor - imfashini kumahlwempu
Iseshoni yesitampu sesigxina kwi studio
Imifanekiso yoPhulo lomfanekiso weNtsha omtsha - iimbono ezifanelekileyo kwi-photoset ecacileyo
Yintoni enxiba ngayo i-shirt ye-women's denim?
Arkhyz - ski resort
Iingqayi zincinci zamakhosikazi
I-powder yamanzi yindlela efanelekileyo yokusetyenziswa kwabasetyhini, amadoda kunye nabantwana
Cyanocobalamin - yintoni le vhamini?
I-Koumiss - recipe
Iqhosha lokukhusela - yonke into ofuna ukuyifumana malunga nokukhulelwa kwe-contraception
17-OH progesterone yanda
Izigqoko zasehlobo zisezantsi
Umthi we-Apple ukusuka kwimiba
I-cutlets yeentlanzi kwisibini esitolo
Ukubonisana - yintoni na kwaye yintoni indima yayo ekulawuleni?
Indlela yokusebenzisa i-maternity capital kuze kube yiminyaka emithathu?
Isifo seLyme eAvril Lavigne
Imfundo yemvelo yabantwana beminyaka yobudala
Iiplayiti ze-Urological for women